म्यादी प्रहरी हुन चाहेका १५० युवा सम्पर्कमा किन आएनन् ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
म्यादी प्रहरी हुन चाहेका १५० युवा सम्पर्कमा किन आएनन् ?
७ कात्तिक, अछाम । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन परिचालनका लागि अछाममा म्यादी प्रहरी बन्न इच्छुक भएका युवामध्ये १५० जना सम्पर्कमै नआएको पाइएको छ । म्यादीका लागि फाराम भरेका यति धेरै संख्यामा युवा अनुपस्थित भएका हुन् ।
अछाममा जम्मा दुई हजार ३१६ युवाले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएकामा छनोटको पहिलो चरणअन्तर्गत आइतबार र सोमबार स्वास्थ्य परीक्षण र अन्य शारीरिक जाँच तथा दौड कार्य सम्पन्न भएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र शारीरिक जाँचको नतिजा निकालेर आज लिखित परीक्षा हुने अछामका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।
अछामका लागि जम्मा एक हजार २३४ जना म्यादी प्रहरी छनोट गर्न पाउने कोटा रहेको प्रनाउ न्यौपानेले बताए । थप २० प्रतिशतलाई वैकल्पिकमा राखिने बताइएको छ । छनोट भइसकेपछि पनि केहीले बीचमै छोड्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वैकल्पिक पनि राखिएको हो ।
PreviousDengue not behind Saha’s death-Public Health Office
Next‘साहको मृत्यु डेंगुले भएको होइन’